Siyaasiyiinta Beelaha dega Mogadishu oo bilaabay in Hubkooda iyo Gaadiidka dagaalka ay kala baxaan Muqdisho… – Balcad.com Teyteyleey
Sida aan kasoo xiganay illo lagu kalsoon yahay Saacadihii la soo dhaafay waxaa magalada muqdisho ka baxay ilaa Lix Gaadiidka dagaalka ah oo ay leeyihiin Ganacsato iyo siyaasiyiin Caan ah kuwaas oo gaaray Magaalada jowhar ee Xarunta Gobolka Shabeellaha dhexe.
Gaadiidkaan ayaa waxaa saaran Ciidamo ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo Ganacsatada waxana la sheegay in ay ka carareen howlgalka hubka dhigista ee todobaadkii labaad Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho ay ka wadaan Ciidamada loogu magacdaray xasilinta amniga Muqdisho.
Ciidamada Xasilinta amniga muqdisho ayaa weli Muqdisho ka wada howlgalka ay kula dagaalamayaan dadka Hubka Culus iyo kan fudud muqdisho ku dhexwata, waxana madaxda dowladda Soomaaliya ay sheegeen in tani looga gol leeyihiin sidii loo nabadeyn lahaa Magaalada Muqdisho.
Siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladdihii dalka soo maray ayaa arintaan u arka kuwo keeni kara dagaalo sokeeye halka dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in ay keeni karto in uu hagaago amniga Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Tiradaan gaaraya il Lixda Gadiidka dagaalka ah iyo Ciidamada la socda oo ay leeyihiin Siyasiyiin iyo Ganacsato ee gaaray Jowhar,ayaan weli ka hadlin madaxda ugu sareysa dowladda Federaalka Soomaaliya,waxaase xusid mudan in weli Muqdisho ku sugan yihiin Siyaasiyiin aan xilka heyn dowladda ee Hubka uu weli Gacanta ugu jiro.
Waxaana meelaha qaar lasoo warinayaa in Siyaasiyiinta ay aagag ka sameyteyn guryahooda iyagoo diidan in hubka laga dhigo.
The post Siyaasiyiinta Beelaha dega Mogadishu oo bilaabay in Hubkooda iyo Gaadiidka dagaalka ay kala baxaan Muqdisho… appeared first on Ilwareed Online.